Waxaad soo iibsataa 1 Lacagta Xamuulka Turutoyinka Laga Helo! - Dib-u-bixinno farsamo
Home » Cuntada dheeriga ah » Waxaad soo iibsataa 1 Lacagta Xamuulka Turutoyinka Laga Helo!
Wakhti xaddidan oo kaliya, saaxiibadayada Saynisyada Aaladaha Dabeeciga ah waxay bixiyaan iibsasho 1 iibsashada bilaashka ah ee 3 ee dhalooyinkooda Turmeric! Iyada oo dalabkan, waxaad ka heli doontaa dhalooyinka 4 ee Turmeric kaliya $ 49 iyo maraakiibta. Riix hoose si aad u hesho dhalooyinkaaga
Tani waa iibso 1 Hel 3 Dalabka dhalada ee Turmeric lacag la'aan ah ayaa ku haboon iyadoo sahayda ugu dambeysa ee Sayniska Dhirirka dabiiciga ah
March 10, 2018 Admin Cuntada dheeriga ah No Comment
Ku qaado dharkaaga bilaashka ah ee Turmeric leh BioPerine!
Ka dalbashada shaandhada qudaarta ee BILAASHA LACAG LA'AANTA LACAGTA S & H